कोरियाले नेपालसंग यास्तो माग राखेपछि कोरियो रोजगारी थप अनिश्चित बन्दै ! कोरियाको भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका पनि जान नपाउने ! – Media News Khabar
कोरियाले नेपालसंग यास्तो माग राखेपछि कोरियो रोजगारी थप अनिश्चित बन्दै ! कोरियाको भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका पनि जान नपाउने !
साउन २९ काठमान्डौ / करिब डेढ वर्षदेखि रोकिएको दक्षिण कोरिया रोजगारी सुरु हुन अझै केही समय लाग्ने भएको छ । कोरियाले राखेको सर्त अनुसार प्रत्यक्ष हवाई उडानको व्यवस्थापन हुन नसक्दा बन्द रोजगार विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले नेपालमा महामारी बढेको कारण देखाउँदै कोरिया सरकारले काठमाडौँबाट सिधा हवाई उडान हुनुपर्ने सर्त राखेको तर सिधा उडानका लागि भाडा दरको टुंगो नलागेको बताए ।
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको दुई वर्षभित्र कोरियाका रोजगारदाताले नबोलाए पुनः भाषा परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने नियम छ। सोही नियमका कारण हरेक वर्ष भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका केही न केही कोरिया जानबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। अहिले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका १० हजार कोरिया जानबाट रोकिएको बताइन्छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
Previous कतार विश्वकपमा सुराक्षाका लागि नेपाली सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने
Next सुतेकै अवस्थामा किन गुमाउँछन् खाडीमा नेपाली श्रमिकले ज्यान ? यस्तो छ कारण